Sidee loo rogaa mawjadaha diyaaradda ee habka mashiinka?
Dunta diyaaradda waxaa sidoo kale loo yaqaannaa dunta dhamaadka, qaabkeeda cadayduna waxay lamid tahay dunta leyliga, laakiin dunta fidsan badanaa waa dunta lagu farsameeyo wejiga dhamaadka silsiladda ama diskiga. Jidka aaladda leexashada ee qaraabada shaqada marka la farsameynayo dunta diyaaradda waa ...
Mabaadi'da Shaqaynta ee Mashiinka Mashiinka Mashiinka iyo Nidaamkiisa.
In habka wax soo saarka caaryada, qayb la xirrira ee caaryada inta badan u baahan yahay in la safeeyey dusha. Barashada tikniyoolajiyadda sifaynta waxay hagaajin kartaa tayada iyo nolosha adeegga caaryada oo sidaas awgeed waxay sare ugu qaadi kartaa tayada sheyga. Maqaalkani wuxuu soo bandhigi doonaa mabda'a shaqada iyo habka ...
Sharaxaad Iyo Falanqeyn Ku Saabsan Tiknoolajiyada Wax Soo Saarka Crankshaft
Crankshafts ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa matoorada. Xilligan, qalabka loogu talagalay matoorada gawaarida badanaa waa bir bir ah iyo bir. Waxqabadka wanaagsan ee jarista birta duleelka, daaweynta kuleylka kala duwan iyo daaweynta xoojinta dusha sare ayaa loo sameeyaa si loo hagaajiyo awoodda daalka, adkaanta iyo ...
Sidee loo mashiin karaa xargaha xarunta mishiinka?
Mashiinka makiinada ee xarunta mashiinka waa mid ka mid ah codsiyada ugu muhiimsan. In geeddi-socodka farsamaynta dunta, tayada iyo waxtarka mashiinku wuxuu si toos ah u saameeyaa tayada iyo waxtarka qaybta. Hoos waxaan ku soo bandhigi doonaa qaababka loo farsameeyo dunta inta badan loo isticmaalo ma ...
Farsamaynta lathe ee CNC waxay xoqaysaa sifooyinka aasaasiga ah
Farsamaynta lathe CNC ee xoqeysa astaamaha aasaasiga ah waa: 1. Awooda wax burburinaysa ayaa sarraysa. Mashiinka shiidi kara marka loo eego qaybta shaqada ee wareegga xawaaraha sare, sida caadiga ah xawaaraha lugta ayaa la gaadhaa 35m / s, qiyaastii 20 jeer aaladda caadiga ah, mashiinku wuxuu heli karaa heerka ka-saarista biraha ka sarreeya. Iyadoo horumarka ...
Daaweynta dusha ka-hortagga daxalka ee xargaha, waxaa habboon in la soo ururiyo!
Xargaha waa waxyaabaha ugu caansan ee qalabka farsamada, shaqadooduna sidoo kale waa mid aad muhiim u ah. Si kastaba ha noqotee, daxalka xargaha inta lagu jiro isticmaalka waa dhacdada ugu caansan. Si looga hortago wasakhda xargaha inta lagu guda jiro isticmaalka, soo saarayaal badan ayaa qaadan doona daaweynta dusha sare kadib ...
Sidee loo Gooyaa Birta Awoodda Sare ee Waxsoosaarka Farsamada?
Bir xoog badan ayaa lagu daraa qadar kala duwan oo ah walxaha isku dhafka ah ee birta ku jira. Ka dib daaweynta kuleylka, walxaha isku dhafan waxay xoojinayaan xalka adag, iyo qaabdhismeedka biraha ayaa inta badan martensite ah. Waxay leedahay xoog badan iyo adkaansho sare, iyo saameynteeda qallafsanaanta sidoo kale way sarreysaa ...
Sidee loo hagaajiyaa wax soo saarka mashiinka?
Waxsoosaarka shaqada waxaa loola jeedaa waqtiga ay shaqaaluhu soo saaraan wax soo saar u qalma halkii cutub ama waqtiga ay ku qaadanayso soosaarka hal shey. Waxsoosaarka oo kordha waa dhibaato dhameystiran. Tusaale ahaan, hagaajinta qaabeynta qaab-dhismeedka wax soo saarka, hagaajinta tayada warshadaha xunxun ...
Sida Loo Noqdo Mastarka Barnaamijyada Mashiinka CNC
Kuwa ku hawlan makiinadaha, si loo wanaajiyo awooddooda shaqo waa muhiim inay bartaan barnaamijyada mashiinka CNC. Si aad u noqotid sayid CNC (fasalka goynta birta), waxay qaadataa ugu yaraan 6 sano qalin-jabinta jaamacadda. Waa inuu lahaadaa heer aragtiyeed oo injineer a ...
Maxay yihiin hababka looga hortago dabacsanaanta handarraabbadeedii inta lagu gudajiray mishiinka?
Kabadh ahaan ahaan, boolal ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa qalabka korontada, mashiinada iyo mashiinada korantada iyo warshadaha kale. Boolku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood: madaxa iyo fur. Waxay u baahan tahay in lala shaqeeyo lowska si loogu dhejiyo laba qaybood iyada oo loo marayo godad. Handarraabbadeedii waa non-saari karo, laakiin way furi doonaan haddii ...
Sidee loo fududeeyaa habka maareynta ee dhirta farsamaynta farsamada?
Hadday ahaan lahayd shirkad kooxeed ballaadhan ama warshad yar oo farsameysa, waxaa lagama maarmaan ah in si wanaagsan loo maareeyo haddii aad rabto inaad shaqeyso oo aad macaash sameyso. Maareynta maalinlaha ah, inta badan waxaa jira shan waji: maareynta qorsheynta, maareynta geeddi-socodka, maareynta ururada, maareynta istiraatiijiga ah ...
Sidee loo Yareeyaa Qaabdhismeedka Nidaamka Goynta Xarigga CNC?
Sababtoo ah tayada wax soo saarka sare iyo saxsanaanta, ka shaqeynta CNC ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa goobta mashiinka. Nidaamka goynta siligga 'CNC', habka ugu dambeeya ee shaqooyinka ugu badan ee la farsameeyo, badanaa way adag tahay in la sameeyo marka qalabka shaqadu uu xumaado. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la qaado tallaabooyin u dhigma ...